China Capsule Bottle PET Tsvuku fekitori uye vagadziri | Qianduo kavha
1. Iyo yekumira jekiseni yekuvhuvhuta kuumba maitiro dhizaini kwete chete inovimbisa kuenderana uye kunyatso kwechubhu madziro ukobvu uye mhando, asi zvakare inovimbisa iyo bhodhoro yakakwira kubvumidzwa kuramba, kukwirira kwekuisa chisimbiso kuita, kukwirira kwechitarisiko kuita uye kukwana kwakakwana panyama uye mega simba.
2. Kusanganisira bhodhoro rinotengwa zvakanyanya pasi rese, kupfupisa nguva yemusika wezvinodhaka.
3, capsule kurongedza bhodhoro rakasarudzika mune yakasimbiswa garandi, dhizaini uye kugadzirwa kwekupakata zvinoenderana neyako brand zano.
4. Yakakosha yekuisa mucherechedzo inovimbisa kuti hapana kubuda.
PET Bhodhoro Sarudzo Criteria
1. Kuiswa chisimbiso kwehombodo chivharo, mvura mhute inowoneka. Kuomeswa kwemhepo uye kunyorova kukwana zvinoita basa rakakosha mukugadzikana kwekuchaja;
2. Hunhu hwemhando yepurasitiki bhodhoro. Kuitisa chigadzirwa chemhando yepamusoro kubva kumugadziri wezvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuona kana zvichidikanwa. Pharmaceutical epurasitiki mabhodhoro emakambani anofanirwa kuumba zvebhizinesi zviyero zvakakwirira kupfuura zvepasirese zviyero, uye indasitiri zviyero zvinofanirwa kuve zvakaomarara;
3. Sarudza midziyo mikuru yemabhodhoro epurasitiki uye fomura yezvokuwedzera: chigadzirwa chemabhodhoro epurasitiki akasimba chinoshanda kune izvo zvakakosha zvigadzirwa, uye zvinofanirwa kusangana nezvinodiwa zvisina-chepfu, zvisina kunhuwa, nezvimwewo, nekuti pane zvakawanda. chikuru mbishi zvigadzirwa, izvo zvinofanirwa kusarudzwa seyakajairika mashandiro ezvigadzirwa. Mahwendefa anowanzo shandisa yakakwira-density polyethylene, polypropylene mabhodhoro, akadai sePET mabhodhoro, ayo anogona kushandiswa kuda kujekesa uye zvirinani chipingamupinyi mashandiro emapeni mabhodhoro, Anowanzo shandiswa mune emvura zvinodhaka mafomati epolypropylene kana polyethylene bhodhoro ester sechinhu chikuru mbishi zvinhu;
4. Kugadzikana uye kuenderana kwemabhodhoro epurasitiki. Paunenge uchishandisa mabhodhoro epurasitiki, kuongororwa kwepamberi kwezvinodhaka kunofanirwa kuitwa kuongorora kudzikama uye kubhadharisa kuenderana pakati pemabhodhoro epurasitiki nemishonga. Kupindirana, kuparara, kushambadzira, makemikari maitiro uye kutsanangudza kwemabhodhoro epurasitiki emishonga anogona kutemerwa nekuonekwa kwesainzi;
5. Simbiso yehutano.
Pashure: Capsule Bhodhoro PET Green
Zvadaro: Capsule Bhodhoro PET Transparent